Nzira Yekuyeukwa Uye Kuita Mari. Um Guia da Marca Inteligente
Paunotanga mucheka iwe unoda kuita mari, nyanzvi dzichakuudza kuti uwedzere yako fungisisa painel painel zvinoita kuti uwane mari uye siya zvese zvimwe kunze kwebhuku. Iwe unoziva zvakakosha kuti uvharire yakatarwa misoro mune yako nicho kuitira kuti uite mari kubva kushambadzira uye yekutsvaga tráfego, asi iwe zvakare unoda uye unofanirwa kuvhara misoro iyo yakasarudzika painel yako chiratid.
Izvo zvese zvakanaka uye chimwe chinhu chaunofanirwa kunge uchiita, nekuti ndizvo zvinoita vanhu kwauri!
1 Dzokera Kuzvinyorwa: Sei Wakatanga Blog da yako?
3.4 Izvo zvakakosha ndezvekuti iwe unotamba makadhi ako nokungwarira pachikuva chesarudzo.
4 TL; DR: Cinco Takeaways
Taura somuenzaniso kuti cheki yako yose inopikisana pfungwa dzakawanda mune imwe niche nokuti unotenda kuti iwe unopa chimwe chinhu chakanaka-ungaita sei mari pane chimwe chinhu chinobvunza chimiro cheo kana dados yako yose inobva kobe mazwaz mazwaz kyoto mazwaz kyoto mazew?
Ndipo apo smart bratch inouya mukutamba. Iko kutora izvo maitiro, dados uye mazwi uye kuashandura kuva chinhu icho chakasarudzika chako, chinotaura nezwi rako.
Saka kana iwe usati watanga blogging kungoita imwe mari kubva kuAdense traffic, chinyorwa ichi chinokutungamira kuti uite mari yako blog. uye kukura marimi ako.
Dzokera Kuzvinyorwa: Sei Wakatanga Blog da yako?
Hazviiti, hazvo? Rudyi! Semuenzaniso, ndine bhajiro mukupa simba webmasters nevatengesi nekupikisana neGoogle-inogamuchirwa SEO chero ipi zvayo inonzwisisika – uye iwe unoziva, izvi hazvisi zvakakwana zvachose, kunyange ziriye kuukich zouvo bouuti rangue.
Os webmasters de Ichokwadi, bhujandi yangu haisi iyo yakanaka yekubudisa mashoko kune são baseados em webmasters e sitesGoogle ifare kana kushandiswa chete "nzira dzakagamuchirwa" dzekuwedzera bhuti yebhugi.
Zvimwe zvezvinhu zvandino kusimudzira hazvikurudzirwe kana kuti zvakanyanyisa, ivo vanonyanya kufunga veGoogle, vanotungamira webhusaiti havangashandisi izvo blog yangu inoparidza zvachose. Wakatanga blog yako kugovana chimwe chinhu chakasiyana, chinotaura nezvenyaya dzako uye zvibodzwa, saka bhurogu yako inofarira chikamu chidiki chevateereri vako. Chikamu changu, cheblogi mune yangu muenzaniso, ivo vese vari webmasters uye vatengesi vasingabvumirani neGoogle tsika uye inozivikanwa SEO uye yekushambadzira mazano.
Frank Gainsford kubva kune 4U marangariro anoyeuchidza kuti zvakakosha zvakadini kusaedza kufadza vanhu vakawanda chete kuti vawane mari, asi kutarisa pane zvaunotarisirwa vateereri.
pegadas semânticas uye kubatanidza izvi kutsvaga kwehutano ndicho chiyiko chaicho chekugadzira mabhizimusi mari. Unofanirwa kuve nechokwadi chokuti wakashandisa rel = autor uye rel = tags muparidzi mukati me HTML yezvigwaro zvako. Izvi zvinokosha pakuvaka zvakadzama zvemashoko ako ezvinyorwa, kunyanya kuburikidza nekushandiswa kwemasangano evanhu, apo vanogadzirisa mabhuku vanogona kuchengetedza hurukuro inoshanda nekubatana kune mamwe mabhuku ebhulogi anowedzera hurukuro, uye inovandudza ruzivo rwemashini ekupedzisira kuburikidza nokunzwisisa zvakadzama kWe nyaya. "
"Kunzwisisa makumbo ekudzivirira [zvinotonyanya kukosha] kuti uvandudze zvakadzama zvaunofunga zvishoma nezvishoma. Izvo zvakadzama zvinyorwa zvako zvemashoko, zviri nani SERPs yako ichava. "
Gainsford anowedzera kuti kutanga nekusarudzwa kwemashamba ekutsvaga uye kutsvakurudza kunokosha kupedzisa pasi nicho yako uye kuchiratidza zvakanyanya, uye kuti iwe "unoda kuva nekunyatsonzwisisa kwehurukuro yako uye unokwanisa kushandisa izvi kunyora zvinyorwa zvebhuruti zvinosangana ne [vako] vateereri chaivo. "
Iyo yakareba nyaya ipfupi, haudi kuve zvakare imwe blogueiro inonyora nezve (um nicho apa).
Mimwe misoro inogara ichinyoro uye iwe unogona kuvashandisa denga mhemberero refu, asi kana iwe uri kunyora izvo munhu wos ari kunyora, asina mamiriro matsva uye hapana chinotaura nezvekuona kwako, iwe hausi kuisa bhaibheri.
Muenzaniso: kana iwe uchitanga bhuku painel-unofanira kuva neNYV, iwe UNODA kuvhara yose yeNNYU yaunonzwa vaverengi vanofanira kutenga, asi kana iwe unonyatsoda iyo nyori munyori kana boka iroro revanyori vemahara Vasina kusununguka vanoparidza paIndaneti vakasununguka, nei uchingotaura Chete pamusoro peavo vanonyanya kutengesa kubva kuAmazon?
Itwewe unofarira kunyora nezvekudya, asi yako blog ndeyese "pfura yakanaka" – iwe uchazoda kubatanidza imwe neimwe inoenderana neyekudya-musoro wenyaya kune yako yakasarudzika chiratidzo, saka, semuenzaniso, ungangoda kutanga nemazwi akakosha ane chekuita zvakananga zvekudya wobva washandisa Icho senge pekutanga kukurukura kuti kudya kwacho kungaita sei kuti vaverengi Vako vave “noutano hwakanaka” Pasina kushungurudza muviri.
Zvaunenge uri kuita pano ndeyokupa vaverengi vako (avo vanoziva kare nezvezvokudya izvozvo) nzira yekubatanidza zvavanenge vaziva kare kana kuti vakanzwa pamusoro pemhinduro dzaunopa, asi izvozvo zvakanyavatoda. Iyi ndiyo imwe nzira yekuita nayo.
Imwe nzira ndeyekushandura dzimwe nguva kana hurukuro nicho nyaya dzine nyaya dzakasiyana nedzidziso yako uye basa.
Semuenzaniso, kana iwe uchitanga SEO blog, unogona kukurukura maitiro akaenzana neMuvhuro uye maitiro ako pachawo musi weChishanu. Chinhu chakavanzika ndechokuwana kuenzanisa pazati pezvose izvo munhu era um ano unificado para a Índia (ou seja, ndiyo yekutanga kwekutsvaga kwavo) uye USP yako uye maonero. Shandisa iyo yekare segoroko kuti ubudise marashi yako, uye chengetedza iyo yekupedzisira seyo feccrum yebasa rako rese.
Saka enda mberi uye nyora nyaya dzinokwevera migwagwa nemari, asi taura navo nenzira dzinosanganisira uye dzakakwanisa kupinda muchiratidzo chako uye USP yako.
Pano painel zviwuni zviviri zvemashoko uye muenzaniso wekukurukurirana kubva pamashoko.
Meu post no Kingged -Kubatanidza maonero angu kune vateereri vepuratifomu
Izvo zvakakosha ndezvekuti iwe unotamba makadhi ako nokungwarira pachikuva chesarudzo.
Ez, izvo zvinoreva kuti iwe unofanirwa kunzwisisa izvo zvinodikanwa uye zvinofarira zvevanhu vanoshandisa iyo chikuva. Kana usiri kuziva sei, apa unowana 12 nzira kuti uzviite, asi iwe wakanakisisa kutengesa nguva dzose kuverenga zvakanyanya sezvinobvira painel zvinyorwa zvakabudiswa uye zvakanakidzwa kuverengwa pachikuva.
Sezvaunodzidza chinangwa chako uye uchitaurirana, iwe uchatanga kuona maitiro anoita kuti zvinyatsogutsikana. Iwe unokwanisa kusungira maitiro aya kune musoro waunoda kunyora pamusoro. Basi iri rekare rinotonyanya kukosha kana ukasarudza khanendesa mushanyi kune guru, munharaunda yakawanda (sem MOZ) você é o único kuti chiratidzo chako hachifarirwi kana kuti chinopesana nemafungiro akawandisa.
Muchokwadi, iwe hausi kuzoda ‘kupfura’ meseji yako kune nharaunda (uye pamwe kukwezva vakatsamwa zvirevo kana troll);.
Kana Izvo nezve Facebook zvemashoko kushambadzira semhando inonyanya kushanda yekushambadzira, asi unotenda izvozvo Quora inogadzira chisarudzo chakanaka, ona kuti ndeapi mararamiro ekutengeserana anokurudzira vanhu vari kutaura pamusoro pe Facebook, uye shandisa Icho se ligar kuti UPE Mazano ehuwandu hweComora sezvimwe zvaunoziva zvinouya nezvimwe zvinobatsira, nezvimwewo.
TL; DR: Cinco Takeaways
Usangoite zvinoitwa nevamwe vese. Iwe unoda kuita mari sebhizinesi, blogger inotarisa painel yakasarudzika chiratidzo, marca kuvaka yako yako.
Edza kuyera pakati pekuita mari uye kuti usakanganwike. Kazhinji, kuisa mabhenefiti kuri ezvakanyanya kunaka uye kuunza chimwe chinhu chakakosha uye chine musoro kune nyika painel kungoita mari. Smart yekumaka iri kuisa pamwe izvo zvatova ipapo uye zvaunoda kupa, musanganiswa wakasarudzika yenzvimbo nicho uye USP, kuratidza chiratidzo chakasimba chisingaregi mari ichichivhiringidza.
Nzira Yekuyeukwa Uye Kuita Mari. 가이드 쿠 스마트 브랜딩
Nzira Yekuyeukwa Uye Kuita Mari. Un ghid ku Smart Branding